AMP WordPress Plugin - easy AMP - XH
dns Umvelisi we-url ye-AMP
power Iplagi ye-WordPress ye-AMP
Iplagi ye-AMP yeWordPress -Faka kwaye usebenze
Iplagi yasimahla ye-AMP yeWordPress yeebhlog zeWordPress , iisayithi zeendaba kunye nokuthumela amanqaku , yenza kusebenze iGoogle-AMP kwiindawo zeWordPress , ngonqakrazo nje olumbalwa!
Ngoku yandisa iwebhusayithi yakho yeWordPress yezixhobo eziphathwayo nge "AMP elula" kwaye uhlaziye iwebhusayithi yakho kwisalathiso sokuqala seFowuni . Ngeplagi kaGoogle-AMP yeWordPress, iiposti zakho zeWordPress zifumana inguqulelo ye-AMPHTML, yona (uGoogle ayifunayo) egcinwe kwindawo yokugcina i-Google AMP ngokuhamba kwexesha kwaye ngenxa yoko, ukongeza kwikhowudi ye-AMPHTML ekhawulezayo, kwakhona ngokukhawuleza kokulayisha amaxesha kwiselula izixhobo Izixhobo.
Yizame, iplagi elula yeWP AMP : Faka. Yenza kusebenze. Igqitywe tu!
Faka iplagi ye-WordPress ye-AMP
Zimbini iindlela zokufaka iplagi yeWordPress ye-AMP- ke khetha enye yezi zinto zilandelayo uze wenze amanyathelo adweliswe apho ukufaka iplagi kwaye ngenxa yoko uyilo oluzenzekelayo lwe "Amaphepha aShukumayo aSebenzayo" (AMP) kwiiwebhusayithi zakho ezisebenzayo:
Faka iplagi ye-WordPress ye-AMP- (ngokuzenzekelayo)
Ngena kwiwebhusayithi yakho ye-WordPress.
Guqula uye kwi "plugins" -> "Faka" kwimenyu
Sebenzisa i-WordPress AMP:
Tshintshela "kwiiplagi" -> "Iiplagi ezifakiweyo" kwimenyu
Jonga kwi "AMP elula" kuluhlu lwee-plugins zeWordPress
Cofa kwikhonkco "Sebenzisa" .
Khuphela ingxelo yangoku ye-plug-in njengefayile ye-ZIP ngale linki ilandelayo yokukhuphela:
"I-AMP elula-ingxelo yangoku"
Emva kokukhuphela iplagi ye-AMP, vula ifayile ye-zip.
Gcina ifolda "engatyiswanga" kulawulo lweWordPress phantsi:
... / wp-umxholo / iiplagi /
... / wp-umxholo / iiplagi / wp-amp-it-up / ...
Ngena kwibhlog yeWordPress
Nach erfolgreicher AMP Installtion und Aktivierung in WordPress kannst Du Dir eine Vorschau Deiner AMP-Seiten anzeigen lassen.
Nceda uqaphele ukuba ukubiza iphepha le-AMP okokuqala kungathatha ixesha elide kunesiqhelo! -Ukuba ulayisha okokuqala okanye xa uhlaziya, iplagi iguqula ikhowudi ye-HTML ibe yikhowudi ye-AMPHTML, ethi kuqala ithathe ixesha elingaphezulu okanye elingaphantsi kuxhomekeke kubungakanani bomxholo. -Emva kwexesha, ngokukhawuleza ixesha lokulayisha alikho ngenxa yephepha lokujonga kuqala le-AMP, kodwa endaweni yokudlala kamva kwiphepha le-AMP likaGoogle ukusuka kwindawo yokugcina i-AMP cache, okt nge-injini yokukhangela iiseva ezikhawulezayo- okt ixesha lokulayisha Iphepha lokujonga kwangaphambili alifanelanga ukuba lifike kwangoko ngokuthe ngqo kwinjini yokukhangela!
Ukufumana ukujonga kwangaphambili kwiphepha lakho le-AMP , yongeza ipharamitha "amp = 1" kwibar yedilesi yesikhangeli ekupheleni kwe-URL yenqaku / ukuthumela.
Amp = 1 - Ukuba akukho ntambo yombuzo isetyenzisiweyo:
& amp = 1 - Ukuba kusetyenziswa umtya wombuzo:
Kutheni iplagi yeWordPress ye-AMP?
"I-AMP elula" yiplagi esemthethweni kaGoogle ye- AMP yeWordPress evela ku-amp-cloud.de kwaye yenza ukuba isebenze ngokuzenzekelayo kwaye isimahla simahla I-Google ehambelana namakhasi aSelfowuni (AMP) kwizithuba zakho zeWordPress!
Molo kwaye enkosi ngotyelelo lwakho! -Ukucwangcisa ukusebenza kwe "www.amp-cloud.de", ii-cookies ziyasetyenziswa. Oku kunokubandakanya iinkonzo kunye nomxholo ovela kubanikezeli benkampani yesithathu, o.k.t.ukubonelela ngemisebenzi yeendaba zosasazo okanye umxholo wevidiyo, kodwa nokwenza ukuba kungaziwa, uhlalutyo lweenkcukacha-manani zokusebenza kwewebhusayithi kuphuculwe kwaye kuxhaswe ngezimali iwebhusayithi ukuze kuqhubeke eli phepha Inkxaso esecaleni. Kuxhomekeke kulo msebenzi, idatha enokunikezelwa kuwe inokugqithiselwa kubantu besithathu kwaye iqhutywe ngabo. Unokufumana okuninzi malunga nokusetyenziswa kunye neenketho zokutshintsha iisetingi zakho zecookie apha: Ulwazi ngokhuseleko lwedatha